» निन्याउरो मुख पारि, टुसुक्क बसेर फेरी माईतीघर सडकमा पलेटी कसेर प्रचण्ड माधव धर्ना दिँदै ! निन्याउरो मुख पारि, टुसुक्क बसेर फेरी माईतीघर सडकमा पलेटी कसेर प्रचण्ड माधव धर्ना दिँदै ! – हाम्रो खबर
निन्याउरो मुख पारि, टुसुक्क बसेर फेरी माईतीघर सडकमा पलेटी कसेर प्रचण्ड माधव धर्ना दिँदै !
काठमाडौँ । माइतीघर मण्डलास्थित सडक सफा देखिन्छ । काठमाडौको मौसमले पनि साथ दिएर घाम झलमल्ल छ । त्यही घाम परेर टलक्क टल्किएका छन् चिल्ला जुत्ता । अगाडि सेतो कपडामा रातो सूर्य चिह्न अंकित झण्डा फिजाएर बसिरहेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि जोकसैको नजर पर्नु स्वाभाविक हो ।
आरामल सडकमा सुस्ताएर घाम तापिरहेजस्तो देखिन्छन् एक हुल मानिसहरु । तिनीहरु हुन्— नेकपा (प्रचण्ड–माधव समूह) का नेता, पूर्व सांसद/सभासदहरु । बीचबीचमा राता तथा सेता झण्डाहरु उठेका छन् भने अगाडितिर सडकमा लामो ब्यानर बिछ्याइएको छ ।
ब्यानरमा लेखिएको छ– प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध धर्ना कार्यक्रम । हो, गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाको यो समूह निरन्तर आन्दोलन तथा विरोधमा उत्रिएको छ ।
सोही सिलसिलामा तेस्रो चरणका कार्यक्रम अन्तरगत नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले आज पनि काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलामा धर्ना जारी राखेको छ । धर्नामा उक्त समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायत नेताहरु धर्नाको अग्रलहरमा बसेका छन् ।
संसद विघटन विरूद्ध प्रचण्ड–माधव समूहले यही माघ १४ गतेदेखि माइतीघरमा धर्ना दिँदै आएको छ ।यसअघि पनि गत पुस १० गते प्रचण्ड, माधव लगायतका नेता कार्याकर्ताले माइतीघरकै चिसो सडकमा ‘हामी यहाँ छौँ’ अंकित प्ले कार्ड बोकेर धर्ना दिएका थिए ।
त्यसयता काठमाडौँमै दुईपटक ठूला विरोध सभा आयोजना गरिसकेको यस समूहले यही माघ २८ गते काठमाडौँमा अहिलेसम्मकै ठूलो विरोध प्रदर्शन गर्ने तयारी थालिरहेको छ ।
संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै नेकपा प्रचण्ड माधव समुहका नेताहरु पुनः माईतीघरमा धर्नामा बसेका छन् ।
उनीहरु यस अघि पनि धर्नामा बसेका थिए । आजको धर्नामा प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल लगायतका सांसदहरु, राष्ट्रिय सभा सदस्यहरु सहभागी छन् ।
संसद पुनस्थापनाको माग गर्दै उनीहरुले देशभर सभा पनि गर्दै आएका छन् ।नेपाल समाचार बाट